Eustatius - Saba - Sint Maarten amalitela ụgbọ mmiri ọhụrụ dị n'agwaetiti
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Eustatius na -agbasa akụkọ » Eustatius-Saba-Sint Maarten amalitela ụgbọ mmiri ọhụrụ dị n'agwaetiti
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • News • ndị mmadụ • Akụkọ Sint Maarten na -agbasa • Eustatius na -agbasa akụkọ • Akụkọ Maarị St Maarten • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Eustatius-Saba-Sint Maarten amalitela ụgbọ mmiri ọhụrụ dị n'agwaetiti
M/V Makana nke Blues na Blues Ltd. si Anguilla.
Makana Ferry na-amalite njem n'etiti agwaetiti n'etiti Statia, Saba na Sint Maarten na Nọvemba 1, 2021.
Blues na Blues Ltd nke Anguilla meriri ọmịiko maka njikọ ụgbọ mmiri n'etiti agwaetiti na M/V Makana.
Makana bụ ụgbọ mmiri 72 nke Saber catamaran ngwa ngwa, nwere ike ibu ndị njem 150 gafee oche abụọ.
Nkwadebe ndị otu agwaetiti na-aga n'ihu na-enwe ike izute ụbọchị mmalite.
Ekwadoro Blues and Blues Ltd. nke Anguilla ga-amalite na njem n'etiti agwaetiti n'etiti Statia, Saba na Sint Maarten na Nọvemba 1, 2021. Nkwadebe nke otu ndị otu agwaetiti na-aga n'ihu ka ha nwee ike izute ụbọchị a. Ozi gbasara ụgwọ ụgbọ na ozi nhazi oge ga -eso.
Blues na Blues Ltd nke Anguilla meriri ọmịiko maka njikọ ụgbọ mmiri n'etiti agwaetiti na M/V Makana. Makana bụ ụgbọ mmiri 72 nke Saber catamaran ngwa ngwa, nwere ike ibu ndị njem 150 gafee oche abụọ. Enwere ọdụ ụgbọ ala dị ala, elu anyanwụ (mepere emepe) na mpaghara klaasị azụmaahịa. Ala dị ala na mpaghara elu nwere ntụ oyi zuru oke ma nwee ụlọ mposi abụọ na ụlọ mmanya.
Makana ga -enye nnukwu ọrụ na ibu. Catamaran ga -eji ụgbọ mmiri eme njem nke ọma n'uhuru 23 nke nwere oke kacha dị 31knots. Njem ndị a ga -ewe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise site na Saba ruo Statia, 75 nkeji si Saba ruo Maarten na nkeji 85 si Statia na Maarten. N'ihi mgbochi COVID-19 dị na St. Kitts, enweghị ike ịhazi ụzọ aga agwaetiti a ruo mgbe amara ọzọ.
Makana bụ okwu Hawashi maka “Onyinye”. Blues & Blues Ltd. nabatara ụgbọ ahụ n'ime ụgbọ mmiri ya n'oge na -adịbeghị anya. Ndị njem nwere ike ịtụ anya ọrụ enyi na ntụkwasị obi nke zuru oke na WiFi na ọrụ ndị ahịa n'ịntanetị. Makana ga -anọ na Statia ma ọ bụ Saba. A na -agba ndị bi ebe ahụ ume ka ha tinye akwụkwọ maka ọnọdụ dị ka ndị ọrụ ụgbọ mmiri.
Samuel Connor, onye nwe Blues na Blues Ltd. kwuru, sị: “Anyị bụ azụmahịa ezinụlọ. Anyị kwenyesiri ike na anyị nwere ike itinye aka na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba nke agwaetiti ndị ahụ site na njikọ ụgbọ mmiri interisland gụnyere St. Barth, Anguilla na Nevis ”.